सरकारका कामबारे छलफल हुन जरुरी छ : माधवकुमार नेपाल [अन्तर्वार्ता]
नेपाल लाइभ | २०७५ कार्तिक २२ बिहीबार | Thursday, November 08, 2018 ००:४४:०० मा प्रकाशित
काठमाडौं- एमाले र माओवादीबीचको एकता केन्द्रमा जति रफ्तार र उत्साहमा भयो, तल्ला कमिटीमा हुनसकेको छैन। पछिल्लो समय त विवाद नै देखिन थालेको छ। एकतापछि शक्तिशाली बनेको पार्टीले नेतृत्व गरेको सरकार पनि प्रभावकारी बन्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ। पार्टी बाहिर वा विपक्षीबाट मात्रै होइन, पार्टीकै नेताहरू पनि यस्तो मत राख्छन्। गएको संसद अधिवेशनमा माधव नेपालले संसदबाटै सरकारको आलोचना गरेका थिए। जसका कारण पार्टीभित्र खैलाबैला नै मच्चियो। उनी र उनी पक्षका नेताहरूले पार्टी सञ्चालन प्रक्रियामा पनि विधि र प्रक्रियामा ध्यान नदिएको बताउँदै आएका छन्। यी र यस्तै विषयमा नेता नेपालसँग नेपाल लाइभका पुष्पा केसी र किशोर दहालले गरेको कुराकानी:
जुन उत्साह र हतारोमा एमाले र माओवादीबीच केन्द्रमा एकता भयो। त्यसपछि खासै उत्साह र हतारो देखिँदैन। किन यस्तो भइरहेको छ?
समयमै ध्यान पुर्‍याएको भए अलि छिटो पनि हुन्थ्यो होला। तर, केही कुरा मिलेन। नमिलेर ढिला भएको हो। अब ढिला गर्नुहुँदैन।
अलिकति ध्यान पुर्‍याएको भए छिटो हुन्थ्यो भन्नुभयो। के कुरामा चाहिँ ध्यान पुर्‍याउनु पर्ने थियो?
विधिमा जाने कुरामा ठ्याक्कै एउटा मापदण्ड बनाएर गइदिएको भए जम्मै कुराहरु एक-दुई हप्तामै सकिने थिए। त्यसमा राम्रो ध्यान गएन। नगएको हुनाले समय लम्बियो। सबै व्यस्त, अनेक खालका चिजहरु आइपर्छन्। प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तै। अरुलाई पनि त्यस्तै। धेरै इंगेजमेन्टहरु हुन्छन्। धेरै कार्यक्रमहरु हुन्छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका कुरा हुन्छन्। यी सबैले गर्दा नभ्याउने स्थिति पनि भएको हो। त्यसैले पनि ढिला भएको छ।
मापदण्ड बनाउने त यहाँहरु नै हुनुहुन्थ्यो नि?
जे सुकै भएपनि कमजोरी रहेको छ। कमजोरीलाई देख्नु र स्वीकार गर्नु नै महानता हो।
खासमा अल्झिएको केमा हो? एउटै कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने, देश विकास गर्ने भन्ने आदर्श थियो । तर, को नेता निकटले अवसर पाउने, कसलाई पेल्ने भन्ने रणनीति हाबी भएको देखिन्छ नि?
होइन। यी सबै कुरा के छन्, कस्ता छन् भन्ने भन्दा पनि यो तिहारको बेला हो। तिहारको बेला मीठो कुरा गर्नुपर्छ। तीतो कुरा गर्नु हुँदैन। मीठो कुराले सबैको हित होस्। सबैको कल्याण होस्। विधिबाट हामी सबै अघि बढ्न सकौं। विधि-पद्धतिको पालना गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राख्न सकौं।
सबैले सबैको इतिहाससँगै योग्यता, क्षमताको यथोचित मूल्यांकन र उचित सम्मान गरेर त्यस ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ।
कम्युनिस्ट पार्टीको जुन स्पिरिट छ, जहिले पनि विश्लेषण, व्याख्या गर्ने, विगतलाई फर्केर हेर्ने, कमजोरीको मूल्यांकन गर्ने, अनुभवहरुको समीक्षा गर्ने र सिक्ने, यी सबै चिजबाट प्रेरित भएर हामी अघि बढौं। र, अब नयाँ गति, उचाई, उत्साहका साथ चाड पर्वपछि हामी आ–आफ्नो ठाउँबाट लाग्नेछौं।
मीठा कुरा गरौं भन्नुभयो। अब बस्ने बैठकमा केही मिठाइ पाक्दै छ?
पाक्दै छ। सेलरोटी पाकिहाल्छ। गुलियो खाइहालिन्छ। त्यसैले मीठोमीठो खाइसकेपछि आनन्दित वातावरणमा बैठक सम्पन्न हुन्छ।
यहाँ केन्द्रमा नै हुनुहुन्छ। तर, तल्लो तहका अधिकांश कार्यकर्ता एकतामा भइरहेको ढिलाइप्रति उत्साहित देखिँदैनन्, किन होला?
त्यस्तो साह्रै त छैन होला। कुनैकुनै ठाउँमा त्यस्तो समस्या सुन्नमा आएको छ। समस्या छ भने ती सबै समस्या हटाउनु पर्छ। सबैले सबैको इतिहाससँगै योग्यता, क्षमताको यथोचित मूल्यांकन र उचित सम्मान गरेर त्यस ढंगले अगाडि बढ्नु पर्छ।
यथोचित मूल्यांकन त यहाँकै भएन भनिन्छ नि?
होइन। दुई अध्यक्ष भइसकेपछि बीचैमा अरु त केही भन्नै मिल्दैन।
नेकपाको एकता प्रक्रियामा कहिले पूर्ण विराम लाग्छ?
छिटो सकिन्छ। अहिले केन्द्रीय कमिटी र स्थायी कमिटीमा मात्रै एकता भएको छ। पोलिटब्यूरो, सल्लाहकार मञ्च, विभाग, अनुशासन, लेखा, निर्वाचन आयोगलगायत बनाउन बाँकी नै छ। प्रदेश कमिटी बनाउनै बाँकी छ। प्रदेश सचिवालय, जिल्ला कमिटी, तल्लो तहका कमिटी, विभिन्न विभाग, जनवर्गीय संगठन र जोडिएको निकाय बनाउनुपर्ने बाँकी छ। कामहरु त थुप्रै बाँकी छन्। तर, क्रमशः गर्दै जानुपर्छ।
प्रदेशको इन्चार्ज र अध्यक्षहरु तोकियो। पार्टीभित्र असन्तुष्टि पनि देखियो। कात्तिक ५ गतेको बैठकमा अब विधि र प्रक्रियामा जान्छौं भनेर अध्यक्षद्वयले प्रतिबद्धता पनि जनाउनुभयो। अबका प्रक्रियामा विधि प्रक्रिया पछ्याइन्छ त?
विगतमा त्रुटि भएको छ। त्यसलाई सच्याउनुपर्छ। र, समीक्षा गरेर सच्याउनु पर्छ। आगामी दिनमा विधि पद्धतिको दह्रोसँग पालना गर्नुपर्छ। यति ठूलो पार्टीलाई चलाउन विधि प्रक्रिया बाहेक अर्को विकल्प छैन। विधिको पालना गर्‍यो भने मान्छेले आफू मापदण्डमा नपरे पनि चित्त बुझाउँछ। मापदण्ड तय गरिएन भने म किन नहुने भन्ने कुराको जवाफ दिन सकिँदैन।
जस्तै, मेयरहरुलाई वा कार्यकारी अधिकारीहरुलाई पार्टीको कुनै पनि कार्यकारी जिम्मेवारी नदिने भनेपछि सबैले चित्त बुझाउनुपर्ने हुन्छ। सदस्यको रुपमा राख्न सकिन्छ। विधिको पालना गर्‍यो भने अनि सबैलाई चित्त बुझ्छ।
पुरानो त्रुटी पनि सच्चिएर आउन सक्ने सम्भावना छ?
सबै विषयको समीक्षा गर्ने काम त, केन्द्रीय कमिटीले स्थायी कमिटीले नै गर्छ।
केही महिनाअघि तपाईंले संसदमा गर्नुभएको सम्बोधनले निकै हलचल ल्यायो । तपाईंले जुन कुराहरुलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुभएको थियो । कारण के थियो?
मेरो धारणा कुनै पनि विषयमा जनताका भावनालाई हामीले व्यक्त गर्नुपर्छ। जनताका भावनाहरु जायज र उपयुक्त छन् भने त्यसलाई स्वीकार पनि गर्नुपर्छ। जस्तो, जनताले काम ढिलो भएको छ भन्छन्।
काम ढिलो भएको त छ कसले ढिलो गरेको छ, कुन कुन ठाउँमा ढिला भएको छ म खोज्छु भनेर हामीले जवाफ दिनुपर्छ। हुँदै होइन भनेर जिद्दी गर्ने होइन। कमजोरी छन् भने सुधार्ने हो। कतिपय कुरामा कन्फ्युजन हुन सक्छ। कसैले आग्रह पाल्न सक्छन् भने यो हो भनेर स्पष्ट पार्न सकिन्छ।
पार्टी कमिटीका सदस्य र सरोकारवालाहरुलाई छलफल र बहसमा सहभागी गराउनुपर्छ। राय सुन्नुपर्छ। र, सबैको विश्वास जित्नुपर्छ।
मानौं, कुनै काम वा नियुक्ति गर्दा भ्रष्टाचार भयो भन्ने आरोप लागेको छ भने प्रष्ट पार्न सकिन्छ। छानबिन गर्नुस्। दोषी ठहर भए सजाय दिन तयार छु भनेपछि बाटो त खुल्यो नि।
तपाईंले जनताका कुरा ल्याएँ भन्नुभयो। तर तपाईंमाथि नै आक्रमण भयो। अध्यक्ष ज्यूको भाषामा भन्दा त अरिंगालहरु खनिए जस्तो देखियो नि?
अध्यक्षज्यूले नि भन्नुभएको छ- हामी ०२९ सालदेखिका साथी हौं हामी। जनताको भावना राम्रोसँग बुझ्छौं। उहाँले राम्रै विचार राम्रै भावनाले बोल्नुभएको हुनुपर्छ।
त्यसो भए, सरकार कहाँ चुक्यो त?
अब सरकारका कामबारे अलि खुलेर छलफल हुन जरुरी छ। प्रधानमन्त्रीलाई मनमा लागेको हुनुसक्छ। भन्दा राम्रो हुँदैन कि भन्ने लागेर मनमा राख्नुभएको पनि हुनसक्छ। मनमा राख्नु हुँदैन। हामीसँग पनि भन्नुपर्छ। सानो टिम बनाएर टिमभित्र समीक्षा गर्नुपर्छ। सबैका राम्रा नराम्रा कामको यथोचित मूल्यांकन हुनुपर्छ।
प्रधानमन्त्रीमा भएका कमजोरी, अरु मन्त्रीमा, नेताहरुमा भएका कमजोरी के छन् सबैको खुलेर छलफल हुनुपर्छ। खुलेर छलफल हुँदा बिगार केही हुँदैन। जति धेरै छलफल र बहस भयो, त्यति राम्रो हुन्छ। जति संवाद भयो, त्यति राम्रो हुन्छ । त्यसैले कमिटीका सदस्य र सरोकारवालाहरुलाई छलफल र बहसमा सहभागी गराउनुपर्छ। राय सुन्नुपर्छ। र, सबैको विश्वास जित्नुपर्छ।
हामीले सरकारको कामको बारेमा पनि समीक्षा गर्ने, पार्टीकै बारेमा पनि समीक्षा गर्ने विषय राखेका छौं। त्यो विषयमा स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ।
सरकारले के गरिरहेको छ भन्ने कुरा पार्टीलाई जानकारी नभएको जस्तो देखियो। केही सदस्यहरु भन्नुहुन्छ– प्रधानमन्त्री र सरकारले के गरिरहनु भएको छ भनेर हामीले ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ कार्यक्रम हेरेर थाहा पाउँछौं।
यस्तो अवस्था किन आयो? त्यस्तो त मलाई थाहा छैन। तर, हामीले सरकारको कामको बारेमा पनि समीक्षा गर्ने, पार्टीकै बारेमा पनि समीक्षा गर्ने विषयमा राखेका छौं। त्यो विषयमा भने हाम्रो स्थायी कमिटीमा छलफल हुन्छ।
केही अघि सरकारको समीक्षा गर्ने, काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउने भन्ने कुरा निकै चर्चामा थियो। पछि सबै कुरा सेलायो। अब समीक्षाको आवश्यकता नपरेको हो?
हटाउने भन्ने कुरा मैले सुनेको छैन।
समीक्षा गर्ने कुरा त सुन्नु भएको छ नि?
समीक्षा गर्ने कुरा त हाम्रै एजेण्डामा राखिएको छ ।
बैठक बसेपछि हुन्छ।
बैठकमा अरु के हुन्छ?
वातावरण हेरिकन हुन्छ।
पछिल्लो समय दिगम्बर झालगायत केही नियुक्ति, निर्मला पन्त प्रकरण र केही अन्य काममा सरकार विवादित बन्यो। सरकार त असफल जस्तो देखिदैं गएको छ नि?
यसलाई असफल भनिँदैन। विपक्षीहरुले भन्ने हो असफल भयो भनेर। एउटा दुईटामा सफल भएन भनेर असफल भयो भनेपछि कसरी मूल्यांकन हुन्छ। एउटा दुइटा कमजोरी हुन सक्लान्।कहिलेकाहीँ गर्न खोज्दा पनि नभएको हुन सक्छ। जस्तो, त्यहाँ प्रहरीकै प्रमुखहरु जिम्मेवार छन् कि? प्रहरीकै शीर्ष नेतृत्वले ढाकछोप गरेको छ कि? मेरै मनमा शंका खडा भएको छ।
मैले नै यहाँ भन्नुपर्ने छ कि, अहिलेका प्रहरीका आइजिपीले किन कदम चालिरहेका छैनन्। कतै उनीहरु 'काले काले मिलेर खाउँ भाले' त गरिरहेका छैनन्?मेरो मनमा शंका छ।
के सरकारलाई असफल बनाउन यस्तो गरियो भन्ने हो?
सरकार असफल गराउन त भन्दिनँ। अपराधी जोगाउन।
प्रधानमन्त्री त शक्तिशाली हुनुहुन्छ। आइजिपी ल्याएर के हो भनेर सोधे त हुन्थ्यो होला नि?
त्यो त सोध्नु भएको होला। मैले उहाँलाई सोध्न पाएको छैन। तर, म आफैं पनि कुरा गर्नेवाला छु। किन कारबाही नगरेको? अरु पनि त्यस्तै त्यस्तै जमात एसपी, डिएसपी, प्रहरीको पोसाकमा बसेका त छैनन्? होइन भने, यस्ता कुकर्मीहरुलाई किन कारबाही नगरेको? सिधा प्रश्न छ। सोध्छु।
सरकारकै कामलाई लिएर पनि जनतामा आशा, अपेक्षा हुन्छ। तपाईं विभिन्न कार्यक्रममा जनताबीच गइरहनुभएको छ। तपाईंले पाउने प्रतिक्रिया कस्तो छ?
म धेरै ठाउँमा गएँ। जनताहरुले धेरै आशा गरेका छन्। आशा मरेको छैन। निराश भइसकेका छैनन्। अवश्य पनि केही गुनासाका पक्ष छन्।
प्रहरीका आइजिपीले किन कदम चालिरहेका छैनन्। कतै उनीहरु 'काले काले मिलेर खाउँ भाले' त गरिरहेका छैनन्?मेरो मनमा शंका छ।
त्यसैले अब धुलो टक्टक्याएर अघि बढ्ने बेला आयो। माओत्सेतुङले भन्नुहुन्छ– धुलो टक्कक्याउनुहोस्। जिउँमा लागेका धुलाहरु टक्टक्याउनुस्। उभिनुस्। अगाडि बढ्नुस र कुद्नुस्।
तपाईं सरकारको नेतृत्व गरिसक्नुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। यसका सजिला अप्ठ्यारा बुझ्नुभएकै छ। प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म यहाँहरुकै अनुकुल सरकार गठनभएको छ। तर पनि काम भएन भनेर निराशा व्यक्त भइरहेका छन्। यस्तै सरकार चलाउन मत मागिएको थिएन भन्ने लाग्दैन तपाईंलाई?
कतिपय कुराहरु बेठीक देखिएको छ, चित्त बुझेको छैन, कसरी हात हाल्ने भन्ने परेको हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको कुरा नखाने, प्रधानमन्त्रीले जायज कुरा गर्दा मन्त्रीले नखाने पनि हुन सक्छ।
म त सिस्टममै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। सिस्टम नै भएन।
खुला परिवेशमा छलफल गर्‍यो भने बल्ल कुराहरु आउँछन्। कुरा अहिलेसम्म सुन्न पाएको छैन। तर, मेरो भनाइ खुला छलफल गरौं भन्ने हो। खासखास व्यक्तिहरुको बीचमा। सडकमा र टुडिखेलमा होइन। खुला भनेको खुलस्त छलफल गरौं। मनभित्र रहेका सबै कुरा बाहिर ल्याऔं। र, क–कसलाई भन्ने हो कमजोरीको खोजी गरौं सुधारौं। अगाडि बढौं।
यहाँले सरकारका कमजोरी कहाँ देख्नुहुन्छ? सल्लाहकार, मन्त्री वा स्वयं प्रधानमन्त्रीमा?
सबै कुरा समीक्षा गरेर भन्न सकिन्छ। कसैमा पनि म भन्दिनँ। कुनै एउटा व्यक्तिलाई तोकेर मैले कहीँ पनि भनेको छैन। म त सिस्टममै सुधार गर्नुपर्ने देख्छु। सिस्टम नै भएन।
निर्माण व्यवसायी, सचिव, डिजी, जिल्लाको इन्जिनियर, फिल्डको इन्जिनियर कसलाई भन्ने? सबै खोज्नु पर्छ। सिस्टममा त्रुटी छ। किन कानुन छिटो बनेनन्? केही कानून त बने, ठीक छ। तर, ढिलो किन बने? कानुन बनाउनेहरु नै छैनन् कि क्या हो? कि, काममा ढिलासुस्ती गर्छन्? अल्छीहरु छन्? यी सबै विषयको खोजी गरिनुपर्छ।
सरकारले पनि त प्राथमिकता छुट्याउन नसकेको जस्तो देखिन्छ नि?
अब, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। र, त्यसपछि तत्कालीन महत्त्वका परियोजनाहरु पनि छन्। अल्पकालीन, तात्कालीन महत्त्वका परियोजना पनि छन्। त्यसलाई प्राथमिकता तोकेर स्वयम् प्रधानमन्त्रीले अनुमोदन गर्नुपर्छ।